CuteFish, tontolon'ny fanoratana vaovao amin'ny fomban'ny MacOS marina. Avy amin'ny Linux
CuteFish, tontolon'ny fanoratana vaovao amin'ny fomban'ny MacOS marina
Darkcrizt | 14/06/2021 16:28 | Nohavaozina amin'ny 14/06/2021 18:29 | fampiharana
Tsy misy fisalasalana iray amin'ireo fiasa tiako indrindra momba ny Linux ny fahaizana manamboatra ny rafitra araka ny itiavanao azy ary amin'ny fomba tena mahavariana, satria atolotray tontolo iainana birao marobe izay tena manintona ary mamela ny fanaingoana hatramin'ny fahafahany manambatra singa samihafa ary afaka miara-miasa amin'ireo mpitantana varavarankely samihafa ( Windows Managers).
Ary izany tokoa miresaka ny lohahevitra, andro vitsy lasa izay ny developer ny Fitsinjarana Linux "CuteFishOS" izay miorina amin'ny Debian (ary raha ny filazan'ny mpamorona azy dia ho vonona amin'ny faran'ny taona izy) nampahafantatra fa miasa izy ireo ny fampandrosoana ny tontolon'ny birao manokana, izay manana ny anarana "CuteFish" ary manana endrika mampatsiahy ny MacOS.
1 Momba ny tontolon'ny Desktop CuteFish
2 Andramo ny CuteFish
Momba ny tontolon'ny Desktop CuteFish
Araka ny voalaza dia mbola tsy vonona ny CuteFishOS, fa amin'izao fotoana izao dia azo atao ny mizaha toetra ny tontolon'ny desktop CuteFish ao amin'ny Arch Linux sy izay avy aminy rehetra, satria ao anatin'ny repositories Arch Linux dia efa misy ny tontolo iainana ary misy vondrona mpampiasa vondrom-piarahamonina Manjaro koa namorona kinovan'ny vondrom-piarahamonina amin'ny fizarana miaraka amin'ity tontolo ity, izay manamora kokoa ny fiaraha-miasa aminy.
Mikasika ny tontolo iainana, azontsika atao ny mahatsapa izany amin'ny voalohany ny interface graphière ampiasainy dia ny KDE Frameworks miaraka amin'ny Qt sy Plasma 5, amin'izay ireo tena tia ny asan'ny KDE dia afaka mahazo aina tsara amin'ny fanandramana ity tontolon'ny birao ity.
Ny tanjon'ity tontolon'ny sary ity dia ny hamolavola izany ho an'ireo mpampiasa "novice". Noho io antony io dia namorona rindranasa manokana izy ireo toa ny manager file (cutefish-filemanager)
Raha ny amin'ny ireo singa manokana momba ny tontolo iainana, novolavolaina teo ambanin'ny tranomboky fishui izay ampiasaina amin'ny fampiharana plugin amin'ny andiana widget Qt Quick Controls 2.
Na dia azontsika atao aza ny mahatsikaritra fa ny interface interface dia mitovy amin'ny an'ny Deepin sy Jing OS ary ity farany no nisy fiantraikany tamin'ny tetik'asa momba ny tontolo iainana.
Ho fanampin'izany, afaka mahita izany isika lohahevitra maivana sy maizina no tohana, varavarankely tsy misy sisintany, aloka eo ambanin'ny varavarankely, manjavozavo ny atin'ny fikandrana ambadika, ny fomban'ny menio ary ny Qt Quick Control, izany rehetra izany dia azo atao noho ny tobin'ny KDE ary ny fitantanana ny varavarankely, ny manager manager dia mampiasa KWin miaraka amina andiana plugins fanampiny.
Voalaza koa fa ny tetik'asa dia mamolavola bara fizahana azy manokana, interface iray efijery feno handefa fampiharana (mpandefa) ary tontonana ambony misy menio eran-tany, widget ary fantsom-pifandraisana.
Anisan'ireo fampiharana novolavolain'ny mpandray anjara tetikasa: mpitantana ny rakitra, calculatera ary configurator.
Toa mandray ny macOS style ho OS elementay ihany koa izy izay tsy dia be ny tabilao arahana maodely. Ny ankamaroany dia manaraka ny fenitry ny Windows style, toy ny Kanelina, Plasma, sns.
Azo antoka fa tetikasa vao natomboka ary mbola lavitra ny lalana alohan'ny hiorenany ho sary. Ka tsy tokony hatao ao anaty masinina famokarana.
Andramo ny CuteFish
Ny fametrahana ny fizarana CuteFish OS dia mbola tsy vonona, fa ny tontolo iainana dia efa azo tsapaina amin'ny alàlan'ny fametrahana ny vondrona fonosana cutefish ho an'ny Arch Linux na amin'ny fampiasana fananganana Manjaro Сutefish hafa.
Ho an'ireo izay liana amin'ny fahaizana mitsapa ny tontolo iainana amin'ny Arch Linux na ny iray amin'ireo derivatives-ny, manokatra terminal fotsiny ary ao no hamakiantsika ity baiko manaraka ity.
Toy izany koa ho an'ireo izay liana te-hanandrana an'i Manjaro amin'ity tontolo ity birao, afaka mahazo ny sary iso avy amin'ny rohy manaraka
Ny fivoaran'ny tetikasa dia voasoratra ao amin'ny C ++ amin'ny alàlan'ny Qt sy ireo tranomboky KDE Frameworks. Ny kaody dia zaraina eo ambanin'ny fahazoan-dàlana GPLv3.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » CuteFish, tontolon'ny fanoratana vaovao amin'ny fomban'ny MacOS marina
Mavesatra ny fampidinana ny ISO.
Mamaly an'i Pirate
Nvidia dia te hiditra amin'ny tsenan'ny fiara mitokana ihany koa ary nahazo DeepMap